Shiinaha dekedda cusub ee darbiga badan oo si dhakhso ah lacag uga qaata xeedho xarkaha PD30W Soosaarka iyo Warshad | Staba Electric
Dekedda derbiga badan New lacag degdeg ah xeedho xarkaha isku laaban karo PD30W
*Iphone Wall Charger 30W Faahfaahinta Faahfaahinta
Fiijiye darbiga USB-C wuxuu ku habboon yahay dadka isticmaala ee doonaya xeedho isku dhafan oo miisaankiisu hooseeyo oo awood badan. Soo saarista illaa 30 W, PD xeedho gidaarka dhammaan aaladaha aad jeceshahay oo ay ku jiraan taleefankaaga, Nintendo Switch, iyo MacBook (waqtiyada lacag bixinta waxay kuxirantahay aaladda qalabka).
Mashiinka isku laabma xeedho xeedho ee gidaarka ayaa abuuraya qaab safar saaxiibtinimo leh, halka jeexdintiisa maareynta fiilada ay si habsami leh u abaabushay fiiladaada. Waxaa lagu dhisay nabadgelyo maskaxda, wareegga maaraynta awoodda waxay bixisaa xad-dhaaf, xad-dhaaf ah, kuleyl badan, wareeg gaaban iyo ilaalin kacsan, waxayna u hoggaansan tahay heerka waxtarka Heerka VI ee Waaxda Tamarta Mareykanka.
PD xeedho dhakhso leh iswaafajin sare & dabacsanaan, xal laba-in-mid ah oo xukun oo awood u leh taageerida dhammaan qalabka USB A / C ku shaqeeya sida taleefannada iyo laptops-ka si madax-bannaan ama isku mar u shaqeeyaan. Xeedho darbiga USB-ga oo leh naqshad furitaan la isku hagaajin karo ayaa kuu oggolaanaysa inaad ka fogaato xayiraadda meelaha kale iyo dib-u-dhigista dekedda USB A / C si loogu habeeyo ku-xirnaanta fiilooyinka ku xiran - gaar ahaan faa'iido leh marka la adeegsanayo fiilo koronto ama ilaaliye koror leh oo leh meelo badan. Sidoo kale qalabka loo yaqaan 'smart IC chip' - Chip-ka horumarsan ee 'IC chip' wuxuu si otomaatig ah u ogaadaa uguna keenaa awoodda ugu fiican ee ku amraya qalabka ku xiran. Qalabkaagu sida ugu dhakhsaha badan ayuu kaaga dallacayaa isagoo ilaalinaya nolosha batterigaaga. (Ku habboon labada PD & QC xukun).
Premium iyo Portable - Dekedaha waxaa lagu tijaabiyay in ay iska caabiyaan in ka badan 10,000 oo adeegsi iyadoo xeedhona loo farsameeyay in ay iska caabbiso amarka joogtada ah ugu yaraan 10,000 saacadood, taas oo ku siinaysa tayo aad ku kalsoonaan karto. Adabtarada xeedho Pd la qaybinta awoodda Intelligent, kordhiyo waxtarka shaqada labada qalab hal ama dhowr. Waxaa loogu talagalay inay la shaqeyso jiilkii ugu dambeeyay ee kombiyuutarada iyo aaladaha casriga ah, taasoo u oggolaanaysa jahaynta jihada laga rogi karo iyo xukun deg deg ah.
*USB Wall Charger 30W Halbeegga
Ultra Amraya Fast Fast Multi USB Charger
Ku qalabaysan dekedda gudbinta korontada ee USBC, oo ay ku rakiban yihiin 30W oo awood wax soo saar ah teknolojiyadda QC3.0, adabtaraddani waxay awood u leedahay inay siiso telefoonnadii ugu dambeeyay ee iPhone iyo kiniinno xawaare sare leh.
Dhignaashada & Dabacsanaanta Pd USB C Xeedho
Xalka laba-hal-ku-dallaca oo awood u leh inuu taageero dhammaan qalabka USBC iyo USBA ee ku shaqeeya sida iPhone, Samsung iyo laptops-yada kale ee USBC inay u shaqeeyaan si madax-bannaan ama isku mar.
Universal Compatibility USB C Pd Xeedho
Iyada oo leh USB A iyo USB C, waxay awood u leedahay inay la shaqeyso qalab elektaroonik ah oo kala duwan sida iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR, X, iwm.
Yar Xamuul USB yar oo la qaadan karo
Waxay qaadataa isla booska Airpod-yada waxaadna si fudud ugu gali kartaa jeeb kasta meelkasta, waadna ku qaadan kartaa safarkaaga.
Hore: Tayada USB-ga lacag-bixinta ah ee xawliga ku shaqeeya ee xawilaadda PD30W smart smart
Xiga: Nooca gan-ga la qaadan karo ee la qaadan karo ee gidaarka xarkaha USB PD 18W